★Secret Garden Studio★Nespresso✔︎WiFi✔︎Netflix✔︎ - I-Airbnb
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Renee
I-Secret Garden Studio iyisitudiyo esizimele esinombhede wendlovukazi, ikhishi, indawo yokugezela ekhethiwe esezingeni eliphezulu, i-espresso, isiphephetha-moya, i-inthanethi, i-Netflix & 50” SmartTV.
Ibekwe phakathi kwezingadi ezimangalisayo, isitudiyo sibekwe eceleni komgwaqo othule oseceleni, nokho useduze ngokwanele ukuthi uya ezitolo zasendaweni.
Futhi kule ndawo kune-Secret Garden Cottage, indlu emangalisayo yama-1880s (eyatholakala futhi ukuze ubhukhe). Indawo ngayinye ifinyelelwa ngokwehlukana
Uzongena endaweni ngesango lensimbi elakhiwe kancane, ukuze uthole indlela yakho egudwini lomlando wamatshe, ngaphansi kwesembozo somvini onwabuzelayo. Ekupheleni kwendlela, sibekwe eceleni kwezingadi zethu ezinhle kanye nomthunzi odabukile wesihlahla esidala se-Robinia yiSitudiyo Sengadi Esiyimfihlo.
Lapho ungena (ukungena wena ngokwakho ngebhokisi lethu lokukhiya elivikelekile), ngokushesha uzothola ukuthandeka kweSitudiyo: usilingi ophakeme wokhuni kanye nekhishi elibukekayo elibheke indawo eshisayo yehlathi lemvula. Indawo yokuphumula, indawo yokudlela neyokulala konke kwenzelwa ukunethezeka nokuphumula, futhi kuhlanganisa amathoni emvelo nezindwangu ezicishe zilethe ingadi yangaphandle endlini. Uzoba neyakho yokugezela yangasese enomfutho omangalisayo wamanzi eshawa, ukukhanya kwemvelo namalambu okushisa, futhi uzokwazi ukuqaqa usebenzisa ukuhamba kwethu ngengubo kanye nesikhala sokulenga.
Ngaphandle, uzokwazi ukufinyelela esakho isiqeshana se-Secret Garden - hlala futhi ujabulele ukutshiyoza kwezinyoni, ingadi eheleza umoya nokuthula okunokuthula okufika lapho imvelo yenza into yayo. Yinhle ngempela engadini, futhi sijabule kakhulu ukukwazi ukwabelana ngayo nawe.
4.94 · 173 okushiwo abanye
ISitudiyo sinikeza okuhle kakhulu kweMclaren Vale: Vala ukusondela ezinsizakalweni zomgwaqo othule KANYE nokuba sezingadini ezinhle. Le ndawo ingaphezu kwamamitha-skwele ayi-1,000 equkethe izingadi ezinhle ezisunguliwe futhi iyindawo nje yokulahla amatshe eSerafino Winery, indawo yokubhaka nezitolo zasendaweni.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi sifuna ujabulele indawo yethu yamaholide enhle njengeyakho. Siyajabula ukukunikeza ulwazi lwendawo, iseluleko kanye nosizo ukuze senze ulwazi lwakho lwesifunda lube ngcono kakhulu! Sizokunikeza imiyalelo elula yokuzihlola futhi uphume, futhi sitholakala ngocingo uma unemibuzo.
Uma ungeyena umuntu wokuxhumana nabantu lokho akunankinga - sinikeza ibhuku lomhlahlandlela eliwusizo elihlanganisa zonke izinto zikagesi zasestudiyo, izindawo ezibalulekile zeMcLaren Vale nezincomo zethu ... kanye nemiyalo ye-Wi-Fi!
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi sifuna ujabulele indawo yethu yamaholide enhle njengeyakho. Siyajabula ukukunikeza ulwazi lwendawo, iseluleko kanye nosizo ukuze senze ulwazi l…